Reuzel - Pink Heavy Hold Oil Based Pomade 4oz | The Myanmar Gentlemen Supplies
Home › Reuzel - Pink Heavy Hold Oil Based Pomade
Reuzel - Pink Heavy Hold Oil Based Pomade
Regular price MMK 21,000
Normal (4oz/113g) - MMK 42,000 MMK Big (12oz/340g) - MMK 107,000 MMK Travel (1.3oz/35g) - MMK 21,000 MMK
--Heavy Hold | Medium Shine | Classic Oil Based Pomade--
အလွန်တာရှည်ခံရုံသာမက Heavy Hold ဖြစ်သောကြောင့် ဆံပင်ထူသူများ၊ ဆံပင်ကြမ်းသူများအတွက် ပုံသွင်းစွမ်းအားအလွန်ကောင်းပြီး၊ ဆံသားခြောက်သွေ့သူတို့နှင့် ခေါင်းလိမ်းဆီအမြဲလိမ်းပေးထားတတ်သူတို့အတွက်လည်းသင့်တော်ကာ ချွေးဒဏ်၊ ရေဒဏ်ကိုလည်းခံနိုင်မည့် ခေါင်းလိမ်းဆီ...
Reuzel - Pink Heavy Hold Oil Based Pomade သည် Holland's Finest Pomade ဟုတင်စားခေါ်ဝေါ်ရသည့် ကမ္ဘာကျော်အရည်အသွေးမြင့် ခေါင်းလိမ်းဆီအမှတ်တံဆိပ် Reuzel - Holland မှ ကျနော်တို့ရဲ့ ဘိုးဘေးများလက်ထက်မှစပြီး ခေတ်အဆက်ဆက်အသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့ ဂန္တဝင် old school - Oil Based Pomade အမျိုးအစား Classic ခေါင်းလိမ်းဆီကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အလွန်တာရှည်ခံသည့် ထိန်းအားအကောင်းဆုံး Heavy Hold ပါရှိပြီး၊ ဆံပင်ကို အနေတော်တောက်ပြောင်စေမှု Medium Shine နှင့် ဆံပင်ကိုတောင့်ခဲသွားစေခြင်းမရှိ၊ အချိန်မရွေးဆံပင်ပုံစံပြောင်းနိုင်စေကာ၊ ဆံပင်ထူသူများအတွက် ချောချောမွေ့မွေ့နှင့် ပုံသွင်းမှုစွမ်းအားအလွန်ကောင်းသော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူကြိုက်များအသုံးပြုနေကြသည့် ခေါင်းလိမ်းဆီဖြစ်ပါသည်။
ဘီးကိုအသုံးပြုပြီး ဆံပင်ကောက်သားကိုပြေစေရုံသာမက ဆံပင်ရဲ့ ရေဓာတ်ကိုလဲ ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ ခေါင်းလျှော်ရာတွင် Build Up အဆီကျန်ခဲ့စေခြင်းကြောင့် နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လိမ်းရာတွင်ခေါင်းလိမ်းဆီအကုန်သက်သာစေပါတယ်။
တာရှည်ခံ ထိန်းအားအကောင်းဆုံး Heavy Hold
Apple Salsa ရနံ့
Reuzel Pink Pomade Grease, formulated with Beeswax, allows product to glide through the hair without clumping, while encouraging moisture retention. Withaunique formula that provides an excellent heavy hold, this pomade for thick and curly hair is perfect for tough to control types. This oil based men’s curly hair pomade gives hairanatural, medium shine.
Long Lasting Heavy Hold
Apple Salsa Scent